ESI GBANWEE FONT NA ANDROID - N'IHI BEGINNERS - 2019
Esi gbanwee font na Android
Ngwaọrụ na-enye onye ọrụ ahụ nhọrọ nhazi maka ntanetị maka interface, na-amalite site na wijetị na ntọala dị mfe, na-ejedebe na ndị na-ese ihe ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ nwere ike isi ike ịmepụta akụkụ ụfọdụ nke imewe, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe koodu nke interface na ngwa na gam akporo. Ka o sina dị, ọ ga-ekwe omume ime nke a, ma maka ụfọdụ ụdị ekwentị na mbadamba ọ dị mfe.
Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa otú ị ga-esi gbanwee font na gam akporo smartphones na mbadamba na ụzọ dịgasị iche, gụnyere na-enweghị ohere mgbọrọgwụ (n'ọnọdụ ụfọdụ ọ nwere ike ịchọrọ). Ná mmalite nke akwụkwọ ntuziaka - iche iche maka ịgbanwe agbanwe ederede na Samsung Galaxy, mgbe ahụ banyere ndị ọzọ smartphones (gụnyere Samsung, ma na gam akporo version ruo 8.0 Oreo). Leekwa: Otu esi agbanwe Windows 10 font.
Gbanwee ederede na ekwentị Samsung ma wụnye akara gị
Samsung phones, yana ụfọdụ ụdị nke LG na HTC nwere nhọrọ iji gbanwee font na ntọala.
Maka mgbanwe dị mfe na Samsung Galaxy, ị nwere ike ịgbaso usoro ndị a:
Gaa Ntọala - Ngosipụta.
Họrọ ihe "Font na ihuenyo".
Na ala, họrọ font, wee pịa Kwụsị ime ya.
Ozugbo e nwere ihe "Download fontu", nke na-enye gị ohere itinye mgbakwunye ndị ọzọ, mana: ha niile (ma e wezụga Samsung Sans) akwụ. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ịfe na ịwụnye akara gị, gụnyere site na ttf font faịlụ.
E nwere ụzọ dị iche iche iji wụnye fon gị na Samsung Galaxy phones: ruo gam akporo 8,8 oreo, FlipFont fonts (ha na-eji na Samsung) nwere ike ịchọta na Ịntanetị ma budata dị ka APK ma ha ozugbo dị na ntọala ahụ, ihe ederede arụnyere na-arụkwa ọrụ nke ọma site na iji ngwa iFont (a ga-atụlekwu ya na ngalaba "ekwentị gam akporo ndị ọzọ").
Ọ bụrụ na gam akporo 7 ma ọ bụ nke okenye ka arụnyere na ekwentị gị, ịnwere ike iji usoro ndị a. Ọ bụrụ na ị nwere ama ọhụụ ọhụrụ na gam akporo 8 ma ọ bụ 9, ị ga-achọ maka mgbakọ iji wụnye mkpado gị.
Otu n'ime ha, ihe kachasị mfe ma na-arụ ọrụ ugbu a (nwalere na Galaxy Note 9) - iji ngwa OkwuGalaxy dị na Ụlọ Ahịa Play: //play.google.com/store/apps/details?id=project.vivid.themesamgalaxy
Nke mbụ, banyere iji nnweta a eji ejizi ederede agbanwe agbanwe:
Mgbe ị wụnye ngwa ahụ, ị ​​ga-ahụ akara abụọ dị na listi ahụ: ịkwalite Okwu Galaxy na onye dị iche - "Gburugburu". Na-ebido ngwa ngwa Galaxy Galaxy n'onwe ya, nye ikikere ndị dị mkpa, wee malite Usoro ahụ.
Họrọ taabụ "Fonts", na n'akụkụ nkuku kama "Ihe niile", họrọ "Cyrillic" iji gosipụta naanị mkpụrụedemede Russia. Ndepụta a gụnyere ederede efu na Google Fonts.
Pịa "Download", na mgbe nbudata - "Wụnye Font".
Rụgharịa ekwentị gị (achọrọ maka Samsung na gam akporo Oreo na usoro ọhụrụ).
Mpempe akwụkwọ ahụ ga-apụta na ntọala ekwentị (Ntọala - Ngosipụta - Ntọala na nlele ihuenyo).
Otu ngwa ahụ na-enye gị ohere ịwụnye akara nke TTF gị (nke zuru oke maka nbudata na Ịntanetị), ma a na-ebo atụmatụ ahụ (ọbụlagodi 99 cents, otu oge). Ụzọ ga - abụ:
Ịmepụta ngwa Galaxy Galaxy, mepee menu (swipe site n'aka ekpe nke ihuenyo).
Na menu n'okpuru "Advanced" họrọ "Mepụta font site na .ttf". Mgbe mbụ ị gbalịrị iji ọrụ ahụ, a ga-arịọ gị ịzụta ya.
Kọwaa aha njirimara (dịka ọ ga-apụta na listi na ntọala), lelee "Họrọ faịlụ .ttf na aka gị" ma dee ebe nke faịlụ ntinye na ekwentị (ị nwekwara ike ịgbatị faịlụ fon ahụ n'ime isiokwuGalaxy / fontsị / omenala / folda ma lelee "Download fontu nchekwa ndị ọrụ ".
Pịa Mepụta. Ozugbo e kere, a ga-arụnye font.
Malitegharịa ekwentị (ọ bụ naanị maka nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo).
A ga-egosipụta ntọala ahụ na ntọala ga-adị maka ntinye na interface nke Samsung gị.
Ngwa ọzọ nwere ike ịwụnye fon na Samsung bụ AFonts. Na Oreo na-achọkwa ịmegharia ọzọ, ịmepụta mkpụrụ edemede ya chọrọ ịzụta ọrụ, ọ nweghịkwa mkpụrụ akwụkwọ Russia dị na katalọgụ.
Ntinye ederede ntinye ederede na Samsung Galaxy na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo dị ebe a: // w3bsit3-dns.com.ru/forum/index.php?showtopic=191055 (lee mpaghara "Fonts maka Samsung na gam akporo 8.0 Oreo.) E nwekwara usoro iji Substratum / Andromeda, nke ị nwere ike ịgụ (na Bekee) ebe a.
Esi gbanwee font na ekwentị gam akporo na mbadamba nkume si n'aka ndi ozo
Maka ọtụtụ gam akporo smartphones na mbadamba, achọrọ ohere mgbọrọgwụ ka ị gbanwee font ngosi. Mana ọ bụghị maka onye ọ bụla: dịka ọmụmaatụ, ngwa iFont ngwa ngwa na-agbakwụnye fon na ochie Samsung na ụfọdụ ụdị ekwentị na enweghị mgbọrọgwụ.
iFont bụ ngwa n'efu na Play Store //play.google.com/store/apps/details?id=com.kapp.ifont nke na-enye gị ohere iji wụnye ụdị mkpirisi gị ngwa ngwa (ma budata ụdị ọnụ ọgụgụ free n'efu) na ekwentị nwere ohere mgbọrọgwụ, nakwa na ụdị ụdị ekwentị ọ bụla (Samsung, Xiaomi, Meizu, Huawei).
N'okwu n'ozuzu, ojiji nke ngwa ahụ bụ:
Wụnye ngwa ngwa ahụ (nye ohere mgbọrọgwụ, ma ọ bụrụ na achọrọ), mepee taabụ "Chọta", mgbe ahụ - - "Font niile" - "Russian".
Họrọ iwu achọrọ ma pịa "Download", na mgbe nbudata - "Wụnye".
Mgbe echichi, ị nwere ike ịmalitegharịa ekwentị ahụ.
Iji tinye fon nke aka gị, detuo faịlụ .ttf n'ime "iFont / custom /" folder, na ihuenyo ihuenyo nke ngwa, mepee taabụ "My" - "My Fonts" ma họrọ ụdị ka a ga-arụnyere.
Na ule m (Lenovo Moto na ekwentị nwere ohere mgbọrọgwụ) ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, ma na ụfọdụ chinchi:
Mgbe m gbalịrị ịwụnye ttọs ttf nke m, windo meghere onyinye inye onyinye na onye edemede akwụkwọ. Mgbe mmechi ma malitegharịa ngwa ngwa ahụ bụ ihe ịga nke ọma.
Ozugbo echichi nke font .ttf adịghị arụ ọrụ ruo mgbe ehichapụchara ụdị fon niile arụnyere na listi iFont n'efu. Ị nwere ike ihichapụ mkpụrụokwu na taabụ "My", mepee ihe nnweta m, họrọ otu font wee pịa "Gburugburu" na akuku aka nri.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịlaghachi ọkọlọtọ ọkọlọtọ, mepee ngwa iFont, gaa na taabụ "My" ma pịa "Preset Font".
Ngwa ikikere yiri nke a bụ FontFix. Na ule m, ọ na-arụ ọrụ, mana maka ụfọdụ ihe mere ọ ji gbanwee ụdị fon ahụ (ọ bụghị na njirimara niile).
Advanced Font Change usoro na gam akporo
Ihe ndị a abụghị nhọrọ niile maka ịgbanwe mkpụrụedemede, ma ọ bụ naanị ndị na-agbanwe mkpụrụedemede na interface dum, ma dịkwa mma maka onye ọrụ novice. Mana enwere usoro ndi ozo:
Site na ịnweta mgbọrọgwụ, dochie Roboto-Regular.ttf, Roboto-Bold.ttf, Roboto-Italic.ttf na Roboto-Bolditalic.ttf usoro faịlụ nke si na usoro / folda nchekwa na fon ndị ọzọ na otu aha.
Na enweghị mkpa ịgbanwe mkpụrụedemede na interface dum - iji ndị launchers nwere ike ịhazi fonti (dịka ọmụmaatụ, Apex Launcher, Go Launcher). Hụ ndị kacha mma maka gam akporo.
Ọ bụrụ na ị maara ụzọ ndị ọzọ iji gbanwee mkpụrụedemede, ma eleghị anya na-emetụta ụdị ngwaọrụ ọ bụla, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ha n'ime ihe ndị ahụ.